Indlu entle yasehlotyeni enelanga eChinacota NDS/COL - I-Airbnb
Indlu entle yasehlotyeni enelanga eChinacota NDS/COL
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguClaudia Estella
Indlu entle yasehlotyeni enedama lokuqubha kwidolophu entle yaseChinácota eNorte de Santander Colombia
Indlu yethu entle yasehlotyeni iza nequla lokuqubha, i-jacuzzi, amagumbi okulala amahlanu, i-BBQ, ikhitshi lesitayile selizwe elinezitovu zegesi, ii-hammocks, iindawo eziluhlaza, imidlalo yebhodi nokunye.
Inexabiso elisisiseko le-250.000 yeedola ngobusuku kubantu be-2, kwaye wonke umntu owongezelelweyo ohlala ebiza i-$ 20.000 eyongezelelweyo ngobusuku kunye nomthamo omkhulu wabantu abayi-15.
Ukuba unomdla, ubhukisho lunokwenziwa kwi-app ye-airbnb
Le ndawo yokuhlala yodwa kwaye ayiphindi, ineendawo ezimnandi, ezamkelayo kwaye embindini wayo indawo yokuzonwabisa (iphuli) enamaqamza okuphumla abizwa ngokuba yi-hydromassages. Ikhabhinethi inekhitshi elihle lelizwe elilungele i-barbecues okanye iindibano zosapho.
I-cabin ibekwe kwindawo evaliweyo, kwindawo ethule kakhulu imizuzu emi-5 ukusuka edolophini ngemoto, eneendawo ezityebileyo kwi-oxygenation ngaphandle kokungcoliswa kunye nombono omhle kakhulu weentaba kunye neentlobo ezahlukeneyo zemithi.
Umbuki zindwendwe ngu- Claudia Estella